“Ma ilaabi doono kulankii Burnley” – Dani Ceballos – Gool FM
(London) 19 Agoosto 2019. Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Arsenal Dani Ceballos ayaa sheegay inuusan iloobi doonin kulankiisii ugu horreeyay uu si buuxda kaga soo muuqday Gunners Sabtidii lasoo dhaafay.
Arsenal ayaa guul muhiim ah ku gaartay Emirates Stadium Sabtidii lasoo dhaafay, kaddib markii ay 2-1 kaga adkaatay Kooxda Burnley, kulankooda labaad horyaalka Premier League ee xili ciyaareedkan.
Haddaba Dani Ceballos ayaa wareysi uu ku bixiyay website-ka rasmiga ah ee kooxda Arsenal ayaa wuxuu ku sheegay:
“Waxa ugu muhiimsan ee kubada cagta waa inaad guuleysato, markaad soo bandhigto ciyaar weyn oo aad kooxda ka caawiso inay guuleysato, waxaad dareemeysaa wanaag”.
“Runta waxay tahay aniga ahaan waxay ii ahayd mid ka mid ah maalmihii ugu xusuusta badnaa ee noloshayda, waxaan u maleynayaa inay wax fiican tahay in markii ugu horreysay aad guul ku gaarto garoonkaada, iyo dareenkaas kasoo muuqday dhammaadka ciyaarta, waxaan u maleynayaa inay igu adkaan doonto aniga ahaan inaan iloobo maalintan”.
“Runtii waxaan doonayaa inaan muujiyo awoodeyda ciyaareed, waxaan leeyahay xamaasad badan xilli ciyaareedkan, waxaan doonayaa inaan ku faraxsanaado kooxdan”.
“Arsenal dhexdeeda kalsooni badan ayaan ku qabaa, waxaan doonayaa inaan dib u soo celiyo wax qabadkeyga”.